False Lashes Tool Set | CATRICE COSMETICS
မျက်တောင်တုတပ်ရာတွင် အသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ထားသော setဖြစ်ပါတယ်
မျက်တောင်အတွက်၊ ကပ်ကြေး ၊ တပ်ဆင်ရန် ကိရိယာနှင့် brushတစ်ချောင်းပါဝင်ပါတယ်
ဒီ ပရျောဖကျရှငျနယျ False Lash Tool Setလေးက မကျြတောငျတုတပျတဲ့အခါမှာ .. အလှနျလှယျကူစပေါတယျ။ မကျြတောငျတုရဲ့ အကှေးလေးနဲ့လညျး ကှကျတိကနြစေပွေီး အထဲမှာ ပါတဲ့ ကတျကွေးလေးနဲ့လညျး လိုအပျသလို ခြိနျညှိဖွတျတောကျလို့ ရပါတယျ။2in 1 brush နှငျ့ ဘီးလေးကလညျး မကျြတောငျကို အံဝငျဂှငျကဖြွဈစမှောပါ။ အရမျးကို အလြှငျလိုနတေဲ့အခါမြိုးအတှကျတောငျ အဆငျပွအေောငျ ထုတျပေးထားပါတယျ။
ဒီ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် False Lash Tool Setလေးက မျက်တောင်တုတပ်တဲ့အခါမှာ .. အလွန်လွယ်ကူစေပါတယ်။ မျက်တောင်တုရဲ့ အကွေးလေးနဲ့လည်း ကွက်တိကျနေစေပြီး အထဲမှာ ပါတဲ့ ကတ်ကြေးလေးနဲ့လည်း လိုအပ်သလို ချိန်ညှိဖြတ်တောက်လို့ ရပါတယ်။2in 1 brush နှင့် ဘီးလေးကလည်း မျက်တောင်ကို အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေမှာပါ။ အရမ်းကို အလျှင်လိုနေတဲ့အခါမျိုးအတွက်တောင် အဆင်ပြေအောင် ထုတ်ပေးထားပါတယ်။
Attention: Keep out of reach of children. Product includes sharp edges. Avoid the eye area.
Professional portable false lashes set: With: 1. Lash scissors to shorten falses lashes. 2. Lash applicator to precisely pick-up and apply false lashes on the lashline. 3. 2in1 brush & comb to separate and shape lashes.